bhimphoto: पुर्‍याउला कहाँ खण्डीकरणले
पुर्‍याउला कहाँ खण्डीकरणले
बाला निस्कने बेलाको गहुँ धमाधम काटेको देखेर म छक्क परेको थिएँ । कारण रहेछ -प्लटिङ । यो सुनसरीको खनार-६ मा खिचेको हो । खनार अहिले इटहरी उपमहानरभित्र मिसियो । यो ठाउँ इटहरी-१३ भएछ । खेत धमाधम प्लटिङ जारी रछ ।
क्यामेरा लिएर खेततिर गएको देखेका केहीले बाटैमा रोक्न खोजे । भने ' किन खिच्नु हुन्छ । भोलि पत्रिकामा आउला । के झमेला लाग्ला । छाडिदिनुस् ।' जमिन उनीहरूले नै प्लटिङ गरेका रहेेछन् । पौने २ बिघा । खिच्न थालेपछि यसरी काट्दै रहेमध्येका एकजना आए र, भने 'भाइ, हाम्लाई पनि एक टुक्रो चाहियो । कसरी चलेको छ भाउ ? '
नयाँ नगरपालिका घोषित, बिस्तारित, बाटो भर्खर पुगेको/पुर्‍याइएको जताततै यस्तै छ । अखबारले त प्राथमिकता दिएरै छापेको हो । खै के भयो सम्बद्ध निकायमा असर भन्ने बुझ्न पाइएन । के होला ? यो खण्डीकरण गरेर घर फलाउने उपक्रममाथि नीतिनिर्माताको नजर किन नपरेको होला ?
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 5:36 PM
जैविक मार्गको दोहोलो
एकै घरमा पाँच सुस्तःमनस्थितिका
वन्यजीव मार्नबाट रोकौं
'छोराले भन्यो-आमा मरेपछिमात्रै घर आउँछु'